Sihlalutya i-S-Box, ileyibheli emhlophe yeBhokisi yeTV kunye nokusebenza kakuhle | Iindaba zeGajethi
Ibhokisi yeTV ye-Android ziyimveliso ethandwa kakhulu, kwaye yeyona ndlela ikhawulezayo nesebenzayo yokuguqula umabonakude wakho ube yinkqubo ekrelekrele ngokwenyani, yiyo loo nto isenza i-Android TV Box ibe liziko lakho lokuzonwabisa ekhaya. Amava am ngeBhokisi yeTV ye-Android ibanzi, ingcinga yetekhnoloji endiyamkeleyo ukuphuma kwayo okokuqala.
Amava andenze ndazi ukuba akuyomfuneko ukwamkela ezona modeli zibiza kakhulu ukuhlangabezana neemfuno zam kwilizwe lolonwabo lokumamela. Namhlanje ndikuzisela i-S-BOX, ibhokisi emhlophe yeleyibhile ye-Android eya kuthi ikwazi ukukuvumela ukuba usebenzise umxholo kuyo yonke indawo, masiye apho.
Njengamaxesha onke, siza kuhlalutya yonke imiba yesixhobo, ukusuka kwizixhobo ukuya kwezona zinto zibalulekileyo, indlela esibonisa ngayo ukusebenza kwemihla ngemihla. Nangona kunjalo, ndincoma ukuba uhambe ngokuthe ngqo kwisalathiso ukuba awufuni kuchitha ixesha lokufunda ulwazi olunokungafuneki, ezinje ngemiba yobuchwephesha yesixhobo. Ngaphandle kokulibaziseka, siya kuqhubeka nohlalutyo lwesixhobo, I-S-BOX yibhokisi ye-TV ye-Android engathobekiyo kubo bonke abaphulaphuli.
1 Izixhobo kunye noyilo lweBhokisi yeTV
2 Izixhobo zekhompyutha kunye nonxibelelwano
3 Amava omsebenzisi kunye noluvo lomhleli
Izixhobo kunye noyilo lweBhokisi yeTV
Ndifuna ukungaziwa, nantsi indlela endiza kuchaza ngayo uyilo lwale S-BOX. Siqala ngokwakhiwa, izinto zeplastikhi zerabha ezithi, nangona inomdla wokuprinta iminwe, icoceke ngokulula. Ayizukukhanya okanye iqokelele ukungcola okuninzi, oko kuthetha ukuba iyakufezekisa umsebenzi wayo ngaphandle kokutsala umdla nakweliphi na igumbi. Yintoni egqithisile, Sifumana uyilo oluncinci noludibeneyo, inyani kukuba ekuboneni kuqala kunika umbono olunge kakhuluAyinkulu okanye imbi, kwaye uyilo yinto yokuqala bathanda ukuyigcina xa kuziwa kwizixhobo kula maxabiso. Ifana kakhulu nesixhobo seXiaomi.
Kwelinye icala sinemathiriyeli yeplastiki ekhatshwa sisiseko se-silicone esiza kuyigcina incamathele kakuhle kwindawo ejikelezwe zii-aerators. Nantsi indlela abaqinisekisa ngayo ukuba isixhobo asifudumali kakhulu nangona sincinci. Kwenye i-TV ye-Android ndiye ndabona ukuba isixhobo siyatshisa (kwaye iphele ukuvala) xa sifuna ukusebenza, njengemovie elungileyo ye-1080p ngenkqubo yokudlala kwakhona. Nge-S-BOX asikaze sihlangane neengxaki ezinjalo, umxholo wehardware kunye noyilo zihambelana ngokubhekisele kuloo nto.
Ngaphambili sinesamkeli se-infrared, ngelixa kwicala lasekunene ekuphela kwento esiyibonayo sisilayidi sekhadi le-MicroSD, into ekufuneka siyigcinile engqondweni, kuba uninzi luhlala lubandakanya imingxunya yamakhadi e-SD asisiseko (kunye nexabiso eliphantsi. Icala lasekhohlo licoceke ngokupheleleyo, kwaye yonke into ebalulekileyo ishiywe ngasemva, into enokubongwa ngayo xa kubandakanya izincedisi. Sinee-USB ezimbini ezimbini kuphela eziza kwanela ikhibhodi kunye nempuku, kunye nokukhutshelwa kwe-HDMI, iJack ye-analog audio kunye negalelo lamandla.
Izixhobo zekhompyutha kunye nonxibelelwano
Siqala ngamandla aluhlaza, sijongane nesixhobo esine-processor esezantsi kakhulu, a Amlogic S905X, kodwa oko kufikelela kwi-2.0 GHz, ngale nto sithetha ukuba phantsi kweemeko eziqhelekileyo iyazikhusela ngaphandle kwengxaki ngazo zonke izicelo ezinikezelwe ekuthumeleni umxholo. Kule nto ihamba kunye Imemori ye-2 GB ye-RAM. Ngale ndlela ukusebenzisa i-Android 6.0 kuya kuqhuba uninzi lwezicelo ezivela kwiGoogle Play Store ngaphandle kwengxaki, nangona ukusetyenziswa kwefayile ye- I-GPU Mali-450 Iya kusishiya sinencasa emnandi, asinakubuza kakhulu kuyo ngaphandle kokutya iaudiyo / ividiyo.
Ineekhowudi eziphambili zevidiyo ezinje nge-VP8, VP9, ​​H.265 kunye ne-H.264, kunye neyona ndawo ixhaphakileyo kwinqanaba lokumamela. Ngokunxibelelana siya kuba neBluetooth 4.0 kunye neWiFi kwibhendi ye-2,4 GHz. Ezona gourmets zesandi ziya kuphoswa sisiphumo sombane, ukuze sifumane owona msebenzi ubonakalayo kwimivalo yesandi, umzekelo, ihlazo, kodwa singafikelela uyiqonde ngexabiso elisinika lona ngokubanzi. Asilibali ngogcino I-16 GB yeROM enokwandiswa ukuya kuthi ga kwi-64 GB ngaphezulu nge-slot ye-MicroSD.
Into enomdla kukuba ine kude, esebenza nge-infrared. Nangona kunjalo, yeyona nto imbi ngesixhobo, indawo ekude ihlala ididekile neTV (ubuncinci kunye neyam) kunye ne-S-BOX ayifumani mqondiso kakuhle. Mhlawumbi amanye amaqhosha alahlekile nangona enesixokelelwano "sempuku" ngakwisilawuli kude. Kunzima ukufumana usetyenziso olulungiselelwe kakuhle kuyo, ke iye yaba yinto engenamsebenzi endlwini yam, ndisakhetha imouse / ikhibhodi engenacingo.
Inqanaba leenkwenkwezi ezi-2
Kwimeko yam andikhawulelwanga nangayiphi na indlela yi-S-BOX, nangona inyani kukuba isiQalisi esiza kumgangatho sihle kakhulu (sibaluleke kakhulu). Ndiyisombulule ndisebenzisa ithuba lokuba isixhobo sithunyelwe nge-ROOT eyenziwe ngokomgangatho kwaye sinokuphelisa zonke izicelo, ezomthonyama okanye ezingafunekiyo. Ndiyilahlile iLauncher esemgangathweni kwaye ndakhetha eyaziwayo kakhulu. Oko kwathiwa, andifumananga Akukho ngxaki ngezicelo eziqhelekileyo ezinjengeNetflix, iMovistar +, Spotify kunye nesikhangeli, ngaphandle kwenyani yokuba ukuba asikhethi ukuyinyusa ngokubeka ulwazi lwethu kuvavanyo, sinokufumana enye ingxaki.
Zisa ingcambu eyenziwe
Isiqalisi sinzima kakhulu
Ushicilelo lwam lufike kuguqulelo lwenziwe lwasebenza iSpanish, into endinokubulela ngayo. Ikwabuyisele usetyenziso olufana neMiracast olunokusikhupha ngaphandle kwengxaki enye. Esi sixhobo sinokufumaneka kwi LONTO ukusuka ngaphezulu kwe- € 40, kwaye ngokunyanisekileyo amava am kukuba ngaphezulu kunokwanela uninzi lwabasebenzisi. Ebhokisini uya kufumana umbane, into onokubulela ngayo ngenxa yokuba bambalwa abaxhotyiswe nge-USB kwaye yinto enobunzima ukuphulukana ne-USB kumabonwakude wethu. Ngokuqinisekileyo iyimveliso endiyincomayo ukuba ayinazo izinto ezininzi zokuzenzisa kwaye ufuna ukusebenzisa umxholo kuphela, ithathela ingqalelo ukusikelwa umda kwayo, ayiyenzelwanga nangayiphi na indlela yokudlala, ngaphandle kwento yokuba ibandakanya ngokuzenzekelayo Inkqubo yoqhagamshelo kunye nolawulo lweBluetooth endigqibe kwelokuba ndingazami ukulugcinela uxinzelelo. Ungayibona koku LINK
ACTUALIZACIÓN: Iingxaki ezininzi zesoftware kunye nokungabikho kwe-firmware yoqobo kwi-intanethi indithintele ngokupheleleyo ekubeni ndiyisebenzise kwakhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Sihlalutya i-S-Box, ileyibheli emhlophe yeBhokisi yeTV kunye nokusebenza kakuhle